बजेट, बजार र विकास : एक जिज्ञासा | ImageKhabar <!-instant articles-->
शुक्रबार, १३ बैशाख, २०७६
बजेट, बजार र विकास : एक जिज्ञासा
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हालै मूल्यवृद्धिसँग बजेटको कुनै सम्बन्ध नभएको कुरा बताएपछि उनी एकाएक चर्चा र विवादका घेरामा परेका छन् । वित्तीय अर्थशास्त्रका कोणबाट बजेट भनेकै बजारसँग सम्बन्धित मुद्रा दर्शन हो । अर्थमन्त्री नबोल्नु पर्ने कुरा बोलेर या बढी बोलेर विवादमा आएका हुन्, त्यो कुरा पछिल्ला दिनहरूमा खुल्दै जाला । उनका अभिमतका पक्षमा बहस पैरवी गर्ने कुनै अर्थशास्त्री पत्रपत्रिका र अनलाइनमा देखापरेका छैनन् ।
उनी यसमानेमा एक्लो अर्थशास्त्री हुन् जसले महँगी र बजेटलाई एकअर्कासँग निरपेक्ष हुने परिभाषाको जामा भिराइदिएका छन् । विश्व अर्थतन्त्रले संसारका राष्ट्रहरूलाई एकैचोटी एकैपटकमा प्रभाव छाड्ने साइबर जमानामा हाम्रा पठित र दिग्गज अर्थमन्त्री भने आम जनतालाई प्रभाव पार्न सक्ने कुरालाई पनि सामान्य कुरा भनेर पन्छिन खोज्छन् भने यस मानेमा अचम्म मान्दा हुन्छ । उनको अर्थशास्त्र संसारको भन्दा बेगल वा अलगथलग छ ?
बरू उनले फेसबुकमै खानुसम्म खप्की खाएका छन् । फेसबुकमा एकजना बौद्धिक व्यक्ति लेख्छन्, ‘सिंहदरबारको वातानुकूलित कक्षमा बसेर भन्न त सजिलो छ तर बजेटपछि बजार आम जनमानसले थेग्नै नसकिने गरी उकालो लागेको छ । एक सयको तेल एक सय बीस भएको छ । यसैगरी दाल, चामल, तरकारी, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास र अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउसमेत निरन्तर उकालो लागि रहेको छ । मन्त्रीज्यूलाई यी झिना मसिना कुराहरूले छुँदैन क्यारे !’
हुन पनि बच्चाले खाने बिहानको दूध विषाक्त छ । दिनको पानी पिउनयोग्य छैन । सार्वजनिक यातायातमा चढेर कुनै पनि काम भनेका समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्न । दिनभरिको धूलो, धूँवा र प्रदुषणबाट जनता जब साँझमा घर फिर्छ अनि राति उसले हेर्ने टेलिभिजन समाचारमा सरकार उही रट लगाइरहेको हुन्छ । रेल, रेल र अनि रेल । नेपालमा पूर्वाधार विकासका सवालमा डा.सर्वराज आचार्यका सामान्य सूत्रहरुकै अनुशरण गरेका खण्डमा पनि ‘ग्रामीण सडक, जडीबुटीको प्रशोधन र पर्यटनमा जति बहुल जनसहभागिता छ अन्य मेघा प्रोजेक्टमा छैनन् ।’ सामाजिक न्याय र पार्टीगत आन्तरिक लोकतन्त्र पनि समृद्धि र विकासलाई सँगसँगै लैजाने बाहकहरू हुन् । त्यसैगरी लोकतन्त्रको गहना भनेको स्वस्थ्य र बौद्धिक विरोध पनि हो । हालै सरकारले राजधानीमा निषेधित क्षेत्रहरू तोकेर जनताको शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकारसमेत खोसेको छ । यो रवैया बढ्दै गयो भने भोलि कुनै पनि बहानामा प्रेसमाथि अंकुश लाग्न सक्छ । अहिले बौद्धिक जनमानसहरू त्यतापट्टी पनि आशंकित हुन थालेका छन् ।
राजधानीको सुन्दरताको भव्य र गौरवपूर्ण प्रतीक मानिने रानीपोखरीको चिरहरण भएको वर्षदिन बढी भैसक्यो । राजधानीकै नगरपिता विपक्षीले काम गर्न नदिएको गुनासो सुनाउँदै हिँडेका छन् । धरहराको कुरै उठ्न छाड्यो । बाहिरी चक्रपथको कुरा सेलाएको धेरै भयो । भित्री चक्रपथको काम पनि नसकिँदै कतिपय स्थानमा बनाइएका आकासे पुल र बाटाहरू फेरि भत्काउनु पर्ने कुरा पत्रिकामा प्राविधिकहरू बोल्न थालिसके ।
सरकार भने जनतालाई सपना देखाइरहेको छ । महँगो रेल सपना । राजधानी हिलोको सकसबाट आक्रान्त भएका बेला गाउँघरमा पहिरोले उठिबास लगाउन थालिसक्यो । गाउँले बाटाहरू समयमै स्तरोन्नति नगरिनाले उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाउने निश्चितप्रायः छ । सरकार भने चीनबाट प्रधानमन्त्री आएपछि केरुङ–काठमाडौँ रेल सपना जप्न छाडेको छैन । प्रधानमन्त्रीले हालै एक कार्यक्रममा ‘पुस १६ गते काठमाडौँबाट टिकट काट्नुस् र कलकत्ता रेलमा जानुस्’ भन्ने बताइसकेका छन् । त्यो रेल कताबाट सुरू भएर कता जाने कुरा चाहिँ बताएका छैनन् ।
राजधानीका जनतालाई अहिले कोटेश्वरकै जाम र चाबहिल–जोरपाटी–साँखुको व्यस्त सडकमा दैनिक रुपले आवतजावत गर्नै सकस भैरहेको अवस्था छ । भुइँमा सजिलोसँग टेक्ने आधार नभएका बेला सरकार भने निरन्तर मोनोरेल, मेट्रो रेल र अन्तर्देशीय रेल सेवाको गुलदस्ता उडाइरहेको छ । हुँदाहुँदा धान दिवसको छेको पारेर राजधानीको मुटु ठमेलमा स्थानीयले धान रोपाइँ गरे । यसबाट पनि सरकार विकासप्रति कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने जनाउँछ । असारे विकास भनेर व्यङग्य गरिने विकास पनि राजधानीमा समेत नभएको अवस्थाले देशको बास्तविक हालतको जाहेर गर्छ ।
रेल सेवा नेपालमा हुनै नसक्ने भने होइन । यसका पक्षमा नेपालले लामो समयदेखि लविङ गरेको कुरा पनि हालै पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा कूटनीतिक मामलाका जानकार विज्ञ मधुरमण आचार्यले बताएका छन् । उनी अगाडि भन्छन् ‘यसपटकको प्रमको भ्रमणमा नेपालले जति कुरा उठाउनु पर्ने थियो ती दह्रो गरी उठाउन सकेन । चिनियाँहरूले नेपालीहरूले गर्नु पर्ने जति होमवर्क नगरेको र अहिले भएका सम्झौताहरू पुरानै सरकार र विगतमा भएका कुराहरूलाई चीनले अगाडि बढाउन साथ दिएकोमात्र हो । हामीले बेसिकल्ली नयाँ कुरामा चिनीयाँहरुलाई सहमतिमा ल्याउन सक्थ्यौं तर चुक्यौं ।’
नेपालमा भएजति हल्ला चीनले गर्न चाहेको पनि छैन । उसलाई नेपालबाट सुरक्षा खतरा नहोस्, भारतको एकछत्त हालिमुहाली नेपालमा नहोस् भन्ने नै चिन्ता उसमा व्याप्त छ । ऊ नेपालको एक असल छिमेकी देश हो । उसले चाह्यो भने नेपालमा रेलमात्र होइन अन्य ठूल्ठूला क्षेत्रमा समेत दीगो लगानी भित्र्याइदिन सक्छ तर त्यसमा हाम्रा नेताकै बोली र प्रस्तावहरू दह्रोसँग उठ्नुपर्छ ।
आचार्य अझ अगाडि भन्छन् –‘नेपालले चीनलाई दिन सक्ने भनेकै पटकपटक एकजोडी गैँडा र सुरक्षा प्रत्याभूति मात्र हो । खासमा चीनले नेपाललाई आफ्नातर्फ ढल्काएर उसको विदेश कूटनीतिलाई भारतसँग चिढ्याउन पनि चाहँदैन । उसलाई नेपालमा भारतको जस्तो व्यापार गर्नु जरुरी पनि छैन ।’
सन् २०१८ को विश्वका सत्तासीन नेताहरूको बरियतामा चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ् पहिलो नम्बरमा, रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दोस्रो नम्बरमा र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तेस्रो नम्बरमा रहेको कुरा देखाएको थियो । चीन अहिले महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा औद्योगिक, सामरिक, वैज्ञानिक र अन्य आविष्कार तथा उत्पादन समेतलाई डरलाग्दो गरी विकास गरी विश्व रंगमञ्चमा अघि बढिरहेको छ । यसबाट अमेरिका र रसिया पनि मनोवैज्ञानिक रूपले डराइरहेको अवस्था छ । यसरी हेरेका खण्डमा चीन नेपालका लागि विश्व राजनीतिमा निकै पछिल्लो प्राथमिकतामा पर्दछ । तर यहाँ जसरी व्याख्या भैरहेको छ त्यो आफ्नो राजनीतिक तुष्टिका लागि पनि प्रयोग भैरहेको छ ।
नेपालको अवस्था भूराजनीतिक राजनीतिको जिलीगाँठोले बेरिएको परिवेशमा छ । यहाँका नेताहरूको बोली र काम गराइको तौरतरिकामा विदेशी प्रभु र महासामन्तलाई घुमाई फिराई चाकरी गर्ने र चुनावमा अनावसनाव भाषण दिएर मत पड्काउने मात्र रहेको छ । केही समय अघि सरकारले भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीलाई गरेको स्वागत् र उसका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले दिएको अभिव्यक्तिले समेत नेपाललाई अझै भारत घुमाउरो भाषामा पेल्नै खोजिरहेको भान भएको थियो ।
आम जनमानसको भावना विपरीत सरकारले मोदीलाई त्यसबेला नागरिक अभिनन्दन गर्नु हुँदैनथ्यो । २ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले जुन भाव र शैलीमा मोदीलाई कुरा लगाउने खालको भाषण सम्प्रेषण गरे त्यसले सचेत नेपाली मात्र होइन देशदेशावरमा रहेका बौद्धिक नेपालीको समेत नुर गिरेको प्रमाणित भयो ।
नेपालले आफ्नै ल्याकत, बुद्धि र वर्गत्ले समृद्धि र विकासको छलाङ् लगाउन सक्छ । कसैसँग निहुरमुन्टी गरेर माग्नै पर्दैन । कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र जलस्रोतमा सही र दीगो पाराले लगानी गरेका खण्डमा पनि नेपाल अघि जान्छ । यसमा दुई मत छैन ।
बेलायतमा बसेर अर्थशास्त्रमा विज्ञता हाँसिल गर्दै गरेका एक अर्थशास्त्री लेख्छन् –‘बरू सय दिन पनि बिताईसकेको सरकारका विरुद्धमा शनैःशनैः विरोधका स्वरहरू पत्रपत्रिका, अनलाइन र फेसबुकका भित्तामा आउन थालेका छन् । सरकारले यातायातका क्षेत्रमा व्याप्त सिण्डिकेटलाई जोरजुलुम लगाएर अन्त्य गर्न खोजेकै हो, त्यो पनि अहिले आएर टुङ्गामा नपुगी मत्थर भएको छ । सरकारका भएका मन्त्री, तिनका पावर मेकरहरू र आसेपासेहरूकै इर्दगिर्दमा रहेका टाउके र लाउकेहरू नै सिण्डिकेटका जननी हुन् । तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने पामर सरकार राख्नै सक्दैन । भलै सरकार दुई तिहाई समर्थनको छ तर हिजोदेखि व्यापार एकाधिकारको जरो गाडेर बसेका दृश्य/अदृश्य पावर मेकरहरूलाई चिढ्याएर सरकार त्यस्तो जोखिम मोल्न चाहँदैन जसले उसलाई भविष्यमा चौतर्फी दबाव झेल्नु नपरोस् ।’
यो कुरा आम जनताले बुझेका छैनन् । जसले बुझेका छन् तिनीहरू यातायात, तरकारी, औषधी र अन्य क्षेत्रको सिण्डीकेटका बारेमा बोल्न रुचि राख्दैनन् । भलै सरकार अहिले ३८ केजी अवैध सुन तस्करीको मामलामा आफैँ पनि जेलिँदै गएको अवस्थामा छ । गृहमन्त्री आफ्नो कार्यबाट पछि नफर्कने सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् भने ठूला माछालाई लुकाउने दाउमा स्वयम् सरकारका केही पावरफूल मन्त्रीहरू लागिरहेको कुरा बाहिर चुहिन थालेको छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले पूर्व र बहालवाला प्रहरीका बारेमा सपाट शैलीमा उत्तर दिइसके । प्रहरीका बारेमा बचाउ गरेर बोल्ने मनसाय उनको नभएको कुरा स्पष्ट भैसकेपछि अब कुरो आएको छ विगतदेखिका मन्त्री, बेपारी, डन, अदृश्य लगानीकर्ता र व्यापारीहरूलाई हालसम्म भए गरेको अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने इस्सुमा सरकार नै मौन छ । नेपालको तस्करीको इतिहासमा यो त्यस्तो केस भएको छ जसका ठूला माछाहरू सबैलाई पक्रेर मुद्दा चलाउँदा नेपालको राजनीतिक सिनोरियो एकैपटक भत्कन सक्छ । मुद्दा नचलाउँदा सरकार आफैँले बारम्बार भन्ने गरेको सुशासन र सामाजिक न्यायको रटका बारेमा फँस्न सक्छ ।
यो कुराले दन्त्य कथामा चकचके बाँदरले चकचक गर्ने सिलसिलामा काठ चिर्न धरिनमा राखेको काठको फेसो निकाल्न उपध्रो गर्दा आफ्नै फुल चेपिएर मरेको प्रसङ्ग उठ्न सक्छ । नेपाली भाषामा पुरानो उखान छ –लहरो तान्दा पहरो गर्जने । हेरौं नेपालमा शान्ति, समृद्धि, विकास, सामाजिक न्याय र विधिको शासन स्थापनाका लागि चुनावका बेलामा आम मतदातालाई राष्ट्रियताको पाठ पढाउँदै भोट संकलन गरी त्यही भोटको भरेङ् बनाएर सत्ताको शिखरमा पुगेको अहिलेको दुखी र गरिबको मसिहा मान्ने सरकारले जनताका मन जित्ने काम गर्छ कि आफ्ना दृश्य÷अदृश्य मालिकहरूकै तावेदारी गर्दै सुदूर भविष्यमा समेत जनतालाई जिल्याउने काम गर्छ ।
आगे सरकारमा रहेका एकदुई इमान्दार मन्त्रीहरूको दिल र दिमागमा देश र जनताप्रतिको भावना अझै बर्करार छ भने जनताको भलाइ हुने काम गर्छ । नत्र भने नेपालमा जहिले पनि सुरुमा कुनै पनि इस्सु उठ्दा जोरसोरका साथ उठ्ने र पछि एकाएक हराउने काण्डहरूको सूचीमा यो सुन काण्ड पनि नहराउला भन्न सकिन्नँ ।
जापानमा रोजगारी : कस्तो छ नेपालीको अवस्था, कति कमाउँछन् ?
हाँडीगाउँको गहना खोज्ने जात्रा (तस्वीरमा)
प्रियंका कार्कीको अर्को तहल्काः बाहिरियो हट एन्ड आइटम डान्स
राष्ट्रपति भण्डारी बसेको होटलमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा
‘काल’ बन्दै दाइजोः प्रहरी देखेपछि शव छाडेर मलामीको भागाभाग !
आईपीएलमा सन्दिप लामिछाने आबद्ध दिल्ली शीर्ष स्थानमा, राजस्थान पराजित
सगरमाथा आधार शिविरबाट क्याम्प तीनसम्म बाटो खुला
विप्लब समूहका ब्यूरो सचिवसहित १३ जना पक्राउ
कुलेश्वरको फलफुल पसलहरुको सटरमा ताला, व्यवसायीहरु आक्रोसित
पाँच वर्षभित्र आर्थिक बृद्धि ९ प्रतिशत पुग्छः तथ्यांक विभाग